ဦးသောင်းညွန့် (သတင်းထောက် သောင်းညွန့်-ဖျာပုံ) ကွယ်လွန် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဦးသောင်းညွန့် (သတင်းထောက် သောင်းညွန့်-ဖျာပုံ) ကွယ်လွန်
ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာမြန်မာမွတ်စလင်များ, ပြည်တွင်း သတင်း
ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၃
အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာ ကောင်စီဌာနချုပ်တွင် ဗဟိုအန်ဆွာရီနှင့် လူငယ်ရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သတင်းထောက် ဦးသောင်းညွန့်(ဖျာပုံ) သည် ယနေ့ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစ္စလာမ် သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် (IRAC) ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ သတင်း ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
အဖ ဦးတင်မောင်၊ အမိဒေါ်စိန်တို့မှ ၁၉၄၈-ခုနှစ် မတ်လ(၅)ရက်နေ့တွင် အမှတ်-၁၀၈၊ ၁၁-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက် ဖျာပုံမြို့၌မွေးဖွားသည်။ ဖျာပုံမြို့ အ.ထ.က(၃)တွင် အထက်တန်းအထိ ပညာသင်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၆၆-ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်သတင်းစာ၊ မြန်မာ့သတင်းစာ၊ ဗိုလ်တထောင်သတင်းစာ၊ ကြေးမုံသတင်းစာ၊ ဂါဒီယန်သတင်းစာများနှင့် သတင်းဂျာနယ်တို့၌ သတင်းနှင့် သတင်းဆောင်းပါးများ စတင်ရေးသားပြီး စာပေနယ်သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး အမှတ်မှာ (၁၄/ဖပန(နိုင်) ၀၆၁၉၈၈)ဖြစ်ပြီး စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင် အမှတ်-၀၁၇၆ ဖြစ်သည်။
၂၀၀၃-ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန် စာမူပြိုင်ပွဲတွင် “အမျိုးသမီးများသိမှတ်ဖွယ်ရာ ဥပဒေရေးရာ”စာမူဖြင့် သုတပဒေသာ(၀ိဇ္ဖာပညာရပ်) ပထမဆု၊ ၂၀၀၄-ခုနှစ် “စာပေရေးသားခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာ”စာမူဖြင့် သုတပဒေသာ(၀ိဇ္ဖာပညာရပ်) ဒုတိယဆု၊ ၂၀၀၅-ခုနှစ်အတွက် “ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမြန်မာ သတင်းစာ ဆရာကြီးများ” စာမူဖြင့် စာပဒေသာ ဒုတိယဆုရရှိခဲ့သည်။မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် သတင်းထောက်အမှတ်-၃၇၉ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ကြေးမုံသတင်းစာတွင် သတင်းထောက် အမှတ်-၁၆၈ ဖြင့် လည်းကောင်း သတင်းများ ရေးသားလျက်ရှိပြီး ဂျာနယ်အချို့တွင် သတင်းများ ရေးသားခဲ့သည်။
အမည်ရင်းမှာ ဦးသောင်းညွန့်ဖြစ်ပြီး ကလောင်အမည်မှာ သတင်းထောက်သောင်းညွန့်(ဖျာပုံ)ဖြစ်ပါသည်။ နေရပ်လိပ်စာမှာအမှတ်(၁၀၈)၊ ၁၁-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမြို့နယ် ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းထောက် ဦးသောင်းညွန့်(ဖျာပုံ)သည်ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီ ဌာနချုပ်တွင် -ဗဟိုအန်ဆွာရီနှင့် လူငယ်ရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းထောက်သောင်းညွန့်(ဖျာပုံ)၏ အမျိုးသမီးများသိမှတ်ဖွယ်ရာ ဥပဒေရေးရာ (ဒုတိယအကြိမ်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် (IRAC) ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ
This entry was posted on January 26, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment